Miriyemu naAroni vanoshora Mozisi (1-3)
Mozisi munhu munyoro kupfuura vanhu vese (3)
Jehovha anopupurira Mozisi (4-8)
Miriyemu anorohwa nemaperembudzi (9-16)
12 Miriyemu naAroni vakatanga kutaura zvakaipa nezvaMozisi pamusana pemudzimai wechiKushi waakanga akaroora, nekuti akanga aine mudzimai wechiKushi.+ 2 Vaiti: “Jehovha akataura achishandisa Mozisi ega here? Haana kutaura achitishandisawo here?”+ Uye Jehovha akanga akateerera.+ 3 Murume uyu, Mozisi, ndiye akanga ari munhu munyoro* kupfuura vanhu vese+ vaiva panyika. 4 Jehovha akabva ati kuna Mozisi naAroni naMiriyemu: “Budai muri vatatu, muende kutende rekusanganira.” Saka vakabuda vari vatatu. 5 Uye Jehovha akaburuka ari mushongwe yegore,+ akamira pasuo retende, akashevedza Aroni naMiriyemu, vakaenda mberi. 6 Akabva ati: “Chinzwai mashoko angu. Kudai paiva nemuprofita waJehovha pakati penyu, ndaizozvizivisa kwaari ndichishandisa zviratidzo,+ uye ndaizotaura naye kuhope.+ 7 Asi handizvo zvandakaita nemuranda wangu Mozisi! Ndakaisa imba yangu yese mumaoko ake.*+ 8 Ndinotaura naye pachena takatarisana chiso nechiso,*+ kwete nezvirahwe; uye iye anoona zvakaita Jehovha. Saka nei musina kutya kutaura zvakaipa nezvemuranda wangu, Mozisi?” 9 Saka Jehovha akavatsamwira kwazvo, uye akabva pavari. 10 Gore rakabva pamusoro petende, uye Miriyemu akarohwa nemaperembudzi akachena sechando.+ Aroni akabva atarisa Miriyemu, akaona kuti akanga arohwa nemaperembudzi.+ 11 Aroni akabva ati kuna Mozisi: “Ndapota zvangu ishe wangu! Ndapota, musatipa mhosva yechivi chataita! Taita zveupenzi. 12 Ndapota, musaita kuti arambe akaita semunhu akafa, akazvarwa aine nyama yakadyika!” 13 Uye Mozisi akatanga kuchema kuna Jehovha, achiti: “Haiwa Mwari, ndapota muporesei! Ndapota!”+ 14 Jehovha akapindura Mozisi achiti: “Kudai baba vake vanga vamusvipira mate kumeso, aisazonyadziswa kwemazuva manomwe here? Ngaaiswe kwake ega kunze kwemusasa+ kwemazuva manomwe, ozodzoswa hake.” 15 Saka Miriyemu akaiswa kwake ega kunze kwemusasa kwemazuva manomwe,+ uye vanhu havana kuputsa musasa kusvikira Miriyemu adzoswa. 16 Vanhu vakabva vatama kubva paHazeroti,+ vakanodzika musasa murenje reParani.+
^ Kana kuti “munhu aizvininipisa.”
^ ChiHeb., “Muimba yangu yese, ari kuratidza kuti akatendeka.”
^ ChiHeb., “muromo nemuromo.”